कान दुखे’को, कान पाकेको देखि बहिरोपना हटाउनका लागि दतिवनको प्रयाेग निकै लाभदायक, यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका ? – Ramailo Sandesh
एजेन्सी । कान दुखेको, कान पाकेको देखि बहिरो’पना हटाउनका लागि दतिवनको प्रयाेग निकै लाभदायक, यस्ताे छ तरिका ! दतिवन (अपमार्ग) को पूरै भागलाई जलाएर सेतो खरानी बनाई त्यसको ८ भाग पानीमा ५ घण्टासम्म राखेर केहीबेर चलाई १० घण्टापछि उक्त पानीलाई राम्रोसँग छानी तताउने ।
यसरी त-ता-उँदा पानी सुके अब सेतो खरानीमात्र बाँकी हुन्छ तब आ’गोबाट झिकी उक्त अपमार्गक्षर २० ग्रामलाई ती मुठ्ठी तीलको तेलमा मिलाई फलामे कराहीमा पकाएर तेलमात्र बाँकी भएपछि झिक्ने ।
उक्त तेललाई बन्द सिसीमा राख्ने ।त्यसपछि २/२ थोपाका दरले दिनको ३ पट’क कानमा राख्नाले कान दुखेको, कान पाकेको, बहिरोपना आदि रोगलाई ठिक गर्दछ । यस’को डाँठले दिनहुँ दाँत माझ्नाले दाँत बलियो र चम्किलो हुन्छ र गिजालाई स्वस्थ’ राख्छ ।
यसको बीजलाई दूधमा पकाएर खानाले हृदयपीडा शा’न्त गराउँछ । भोक–तीर्खा हराउँछ, कामशक्ति बढ्दछ, क’मजोरी हराउँछ । सन्तान नहुने समस्याबाट चाँडै मुक्ति मिल्दछ ।
रातभरि भिजाएको बदाम खानुहोस्, केही दिनमै मिल्नेछ आश्चर्यज’नक लाभ: जाडो मौसममा घाम ताप्दै बदाम खानको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ जुन हर कोहीलाइ मनपर्छ। तर धेरैलाई थाहा भने नहोला कि यो बदाम खाँदा हाम्रो शरीरलाई फाईदै फाइदा छन्। बदाम खाँदा सहि तरिका अपनाउन भने जरुरी छ सा’थै सतर्क हुन पनि जरुरी देखिन्छ।
बदाममा इनर्जी, फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिनको मात्रा अत्याधिक हुने गर्दा भिटामिन वा मिनरल्ससंग जोडिएका कयौं शारीरिक समस्यालाई टाढै राख्न मद्दत पुर्याउँछ । बदा’म खाँदा जति मिठो छ त्यति नै शरीरको लागी फाईदाजनक छ। आउनुहोस चर्चा गरौ बदाम खाने तरिका र यसका फाईदाको बारेमाः
बदाम खाने सहि तरिका र सतर्कता: हुन त तपाईले बदाम त्यत्तिकै खाँदा पनि हुन्छ तर त्यसको सहि तरिका भने भिजाएर खाँदा राम्रो हो । विशेषज्ञहरुका अनुसार बदामलाई भिजाएर खाँदा यसमा पाईने न्यूट्रिएंट्स शरीरमा पूर्ण तरिकाले लाग्ने छ ।
त्यस्तै बदामलाई सख्खरसंग मिसाएर पनि खान सकिन्छ भने सलादमा पनि मि’साएर खान सकिन्छ । तर बदाम खाँदा ध्यान भने पुर्याउन जरुरी समेत छ । बदामले शरीरलाई गर्मी समेत प्रदान गर्ने हुँदा एकैचोटी धेरै बदाम सेवन गर्दा शरीरमा आउने अत्याधिक उर्जाले गर्दा हानी पुर्याउन सक्छ । एकैचो’टी पेट भर्ने गरी बदाम सेवन भने नगर्नुहुन विशेषज्ञहरु सुझाव दिन्छन ।
बदाम खानुका फाइदै फाइदा : १) बदामले शरीरमा गर्मी दिने हुँदा जसले गर्दा ब्लड सर्कुलर समेत राम्रो संग हुन पाउँछ । त्यस्तै बदामको सेवनले गर्दा जाडो महिनामा हुने भा’ईरल इन्फेक्सन वा रुघा खोकीबाट बचाउन मद्दत पुर्याउँछ।
२) बदाममा क्यालोरीको मात्र कम हुन्छ । साथै यसको से’वनले गर्दा मेटाबोलिजम र ब्लड सर्कुलेशन बढाउँछ जसले गर्दा तौल घटाउन धेरै मद्दत पुर्याउँछ ।
३) बदाम खाँदा पेट भरिएको जस्तो हुने गर्छ जसले गर्दा धेरै खा’ना खाने बाट तपाईलाई बचाउछ । यदि तपाईलाई घरिघरि भोक लागिरहन्छ भने बदामलाई मिसाएर खाने कुरा खाने गर्नुहोस, थोरै खाँदा नै तपाईको पेट भरिन्छ जसले गर्दा भोक मेटाउन धेरै खाईरहनु पर्दैन । तौललाई सन्तुलित राख्न यसले मद्दत पुर्याउँछ ।
४) बदाममा मोनो-सैचुरेटेड फ्याटी एसिड पाइन्छ जसले गर्दा कोलेष्ट्रोल लेभललाई कन्ट्रोल गर्न मद्दत पुर्याउछ । यसको सेवाले गर्दा मुटुको बिरामीलाई पनि बच्न मद्दत पु’र्याउँछ ।
५) एंटी-ऑक्सीडेंट र ट्रिप्टोफेन गुणले भर्पुर बदाम सेवनले गर्दा त’नाव बाट पनि मुक्ति दिलाउन मद्दत पुर्याउछ । डिप्रेसन हुनबाट पनि बदामको सेवनले बचाउछ।
६) बदामको निय’मित सेवन गर्दा मधुमेहको सम्भावना २१ प्रतिश’तले घ’ट्न मद्दत पुर्याउछ। बदाममा पाईने मैगनिज नामको तत्वले ब्लड शुगरलाई कन्ट्रोलमा राख्छ जसले गर्दा मधुमेहको ख’तरा केहि हद सम्म कम हुन पुग्छ।
७) सुत्केरी अवस्थामा बदाममा पाईने फोलिक एसिडले गर्दा शिशुमा हुने न्युरल ट्युब डिफ़ेक्टको खतरा कम हुन मद्दत पुर्याउछ। ८) बदाममा पाईने मोनो-सैचुरेटेड एसिड र एंटी-ऑक्सीडेंट गुणले स्किनलाई नरम बनाउन मद्दत पुर्याउछ। स्किनमा ब्लड सर्कुलेशन बढाउन मद्दत पुर्याउने हुँदा अनुहारमा चमक ल्याउछ ।